Ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda oo iska-horimaad ku dhex maray magaaladda Muqdisho – Madal Furan
Hoy > Warka > Ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda oo iska-horimaad ku dhex maray magaaladda Muqdisho
Ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda oo iska-horimaad ku dhex maray magaaladda Muqdisho
Muqdisho (Madal Furan) – uguyaraan Laba askeri oo ka tisan Milateriga Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen Laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii Ciidamo ka wada tirsan oo Milateri iyo Boolis ah ayaa lagu soo warmayaa in maanta ay ku dagaalameen gudaha magaaladda Muqdisho.
Deegnaaka Kaxda ee Koofurta Galbeed ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in ciidamadaasi dagaal ku dhex maray, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Iska hor imaadka ayaa yimid, kaddib markii Ciidamada Booliska oo ka socday qeybta Booliska Gobolka Banaadir ay weerareen bar koontarool oo Ciidamo ka tirsan Milateriga lacago sharci darro ku qaadayeen.
Guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil ayaa sheegaya in Ciidamada Booliska ee gaaray degmada uu dalbaday
Goobta dagaalku ka dhacay ayaa horayba dowladdu u geysay ciidamadan Milateriga kadib markii ay ka soo cawdeen shacabka degmada Kaxda Kooxo Burcad ah oo lacago Leejo ah ka qaada gaadiidka, balse ciidamadii halkaas la geeyey qudhoodu ay bilaabeen talaabo la mid ah tii Burcadda.
Ciidamo ka tirsan Booliska ayaa iminka gacanta waxay ku hayaan goobtii uu iska horimaadku ka dhacay, waxaana la soo sheegayaa in xaaladu ay iminka degan tahay.
SAWIRO:- Ururka Al-shabaab oo dhoolotus ciidan salaada ciida ka dib ku soo bandhigay degmada Jilib